ခေတ်သမိုင်း တည်ဆောက်ရာတွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ကောင်းမြတ်သော အင်အားများမှာ အရေးပါကြော? - Yangon Media Group
ခေတ်သမိုင်း တည်ဆောက်ရာတွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ကောင်းမြတ်သော အင်အားများမှာ အရေးပါကြော?
ခေတ်သမိုင်းတည်ဆောက်ရာတွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ကောင်းမြတ်သောအင်အားများမှာ အရေးပါကြောင်း၊ မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာအတွက် ကောင်းကျိုးပြုနိုင်ပါစေကြောင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သဝဏ်လွှာပို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏သဝဏ်လွှာတွင် ၂၇၅၇ ခုနှစ်၊ သလေးထိုင်ခုတ်ဖို ပြာသိုလဆန်း ၁ ရက်နေ့သည် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာအနှံ့ရောက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသည့် ကရင်တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ အလေးအမြတ်ဂုဏ်ယူတန်ဖိုးထား၍ကျင်းပလေ့ရှိသည့် ကရင်အမျိုးသားနှစ်ကူး မင်္ဂလာနေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်းမင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံသည့် နှစ်ကူးအခါသမယသည် ရှေးယခင်ကတည်းက ကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ကောက်သစ်ပေါ်ချိန်တွင် ကောက်သစ်စားပွဲ များကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ကျင်းပခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ် ဟောင်းကာလအတွင်းက မိမိတို့ ကြိုးစားပမ်းစားစိုက်ပျိုးထားသည်များမှ ဖြစ်ထွန်းလာသည့် အသီးအပွင့်များကို စိတ်တူကိုယ်တူ စုပေါင်းရိတ်သိမ်းပြီး မိသားစုဝင်များ စုံစုံလင်လင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့် သုံးဆောင်စံစားကြသည့် မြတ်နိုးဖွယ်ရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဖြစ်ကြောင်း၊ ကောက်သစ်စားပွဲအခါသမယတွင် မိသားစုဝင်အားလုံးစုံစုံညီညီ ပြန်လည်တွေ့ ဆုံနိုင်ရန် ကြိုးစားကြသည့်နည်းတူ ယခုအခါ ပြည်ထောင်စုအတွင်း ညီအစ်ကိုသားချင်းများအားလုံး စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် အေးအတူပူအမျှ မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်နိုင် ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
ကရင်တိုင်းရင်းသားများသည် ရိုးသားတည်ကြည်ခြင်း၊ အပင်ပန်းခံပြီး ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ဇွဲသတ္တိရှိခြင်း စသော အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသည်ဟူသော ကျော်စောသတင်း သမိုင်းတစ် လျှောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယခုခေတ်သမိုင်းတည်ဆောက်ရာတွင် ကရင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ကောင်းမြတ်သောအင်အားများသည် အရေးပါသောကဏ္ဍမှ ပါဝင်ထောက်ပံ့မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းဟူ၍လည်း သဝဏ်လွှာတွင် ပါဝင်သည်။ နေ့ထူးနေ့မြတ်များကို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် ကျင်းပသောအခါတွင် စုစည်းမှု မည်မျှအဓိကကျသည်ကို ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီး ကောက်ရိတ်သိမ်းရာ၌ ပူးပေါင်းရိတ်သိမ်းခြင်းဖြင့် ထိရောက်မြန်ဆန်စေသကဲ့သို့ ကောက်သစ်စားချိန် အတူတကွ သီဆိုကခုန်ခြင်းသည် တစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းထက်များစွာ သာလွန်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သဝဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအပြင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များသည် အတိတ်ကဖြစ်ရပ်များကို သတိရ၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် အချိန်အခါနှင့် အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက်များ တည်ဆောက်သည့် အချိန်အခါဖြစ်ကြောင်း၊ ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးမှာ ပြည်ထောင်စုသားအားလုံး အဟောင်းထက် သာလွန် ကောင်းမွန်သော အသစ်များ ဖန်တီးဖြစ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း၊ ကရင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် ၂၇၅၇ ခုနှစ် မှစ၍ အချိန်များကုန်ဆုံးသည့်တိုင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ကမ္ဘာကြီးအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာ ပြုနိုင်ပါစေဟု ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါကြောင်းဟူ၍ပါရှိသည်။
Room Shaker သီချင်းနဲ့ တစ်ကျော့ပြန် လှုပ်ရှားလာတဲ့ အိုင်လီ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဆောင်ရွက်မည့် ပြည်သူ့အတွက် လူငယ် ရက် ၂၀ အစီအစဉ်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူငယ်??
အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားသူ နိုင်ငံခြားသား ၅ဝ ကို လဝက ဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် လူတွေ့စစ်ဆေ?